AKHRISO: Guddiga Farsamada Galmudug oo Aqoonsaday 20-ka Xildhibaan ee Ahlu Sunna la siiyay | HalQaran.com
AKHRISO: Guddiga Farsamada Galmudug oo Aqoonsaday 20-ka Xildhibaan ee Ahlu Sunna la siiyay
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Guddiga Farsamada ee maamulka Galmudug ayaa Jimcihii maanta si rasmi ah u xaqiijiyeen inay diiwaan-geliyeen labaatankii xubnood ee Ahlu Sunnada Gobolada Dhexe laga siiyay Baarlamaanka Galmudug.
Guddiga Farsamada Maamul u samaynta Galmudug ayaa aqbalay liiska Xildhibaanada ugu horereya ee Galmudug, oo ay soo gudbiyeen Ahlu Sunna Waljamaaca.
Qoraal uu soo saaray guddiga farsamada ayuu ku sheegay in xubnaha ay soo gudbisay Ahlu Sunna u aqoonsadeen inay yihiin Xildhibaanadii ugu horreeyay ee ka mid noqonaya Baarlamaanka cusub ee Galmudug.
Xildhibaanada Ahlu Sunna ayaan wax saamayn ah ku yeelan doonin kow iyo tobanka shuruud ee laga doonayo shakhsiyaadka doonaya inay ka midka noqdaan Baarlamaanka xigga.
Guddiga Farsamada Galmudug aqoonsaday
liiska ku daray Baarlamaanka Galmudug